Guriceel: Kooxo hubeysan oo weeraray sarkaal la shaqeeya hay'adaha - Caasimada Online
Home Warar Guriceel: Kooxo hubeysan oo weeraray sarkaal la shaqeeya hay’adaha
Guriceel: Kooxo hubeysan oo weeraray sarkaal la shaqeeya hay’adaha
Guriceel (Caasimada Online) Sida ay Shabakada Caasimada Online u sheegeen wariyaal ku sugan magaalada Guriceel ee gobalka Galgaduud, waxa maanta halkaas lagu dhaawacay nin la shaqeenaayay hey’addaha gargaarka, kaasoo lagu magacaabo Saleebaan Maxamed Saalax.
Nin la weerraray ayaa la socday gaari ay lahaayeen hey’addaha gargaarka , gaar ahaan kuwa caafimaadka iyo xaananada xoolaha, waxana la sheegay in uu ka badbaday weerrarkaas.
Illaa hadda ma cadda sababta loo weerraray sarkaal kan ka tirsan hey’addaha gargaarka ee ka shaqeeya Gobalka Galgaduud.
Maamulka Ahlu Sunna oo ka arrimiya Guriceel ayaa saxaafadda u sheegay in weerrarkaas loo qabtay nin la sheegay in uu ahaa ninka rasaasta ku furay gaariga.
Ma ahan markii ugu horreysay oo magaalada Guriceel lagu weerraro shaqaalaha hey’addaha gargaarka, Soomaaliya wax caadi ka ah in la weerraro shaqaalaha samafalka, mararka qaar waaba la dilaa, cidna looma soo qabto.